International Education Expo 2019 Archives - Crown Education
International Scholarships Info
MBA Scholarship Info
Scholarships Around the World
Scholarships & Testimonials
USA Grade 12
info@crown-education.org Call Us: +95 (9) 977 977 200 Book Appointment >
International Education Expo 2019
Category: International Education Expo 2019
Posted on: Mar 08 ,2019
သင့်တင့်မျှတသည့်စာသင်စရိတ်နှင့်အတူ ကျောင်းအပြီး တရားဝင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်များရှိခြင်း တို့ကြောင့် ယခုနှစ်များအတွင်း ကနေဒါနိုင်ငံပညာရေးကို ရွေးချယ်မှုနှုန်း သိသိသာသာပိုမိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံတွင် ကျောင်းတက်နေသည့်အတွင်း အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခွင့်တွေအပြင် internship programများထက်သာလွန်ပြီး Co-Op အဖြစ်လူသိများကြသည့် Cooperative Education၏ ကျောင်းစာသင်ကြားမှုနှင့်လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ...
US ရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာဆက်လက် သင်ကြားလိုသူတိုင်း ရွေးချယ်စဉ်းစားသင့်သည့် ကျောင်းလခသက်သာသောUniverity of South Florida
Posted on: Mar 04 ,2019
❒ Fulbright Scholarsများအများဆုံးမွေးထုတ်ပေးထားသော၊ ကျောင်းလခလည်း သက်သာသော ❒ နှစ်စဉ်ပညာသင်ဆုများလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးလေ့ရှိသော ❒ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိ စတုတ္ထအကြီးဆုံး ပြည်သူပိုင်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သော ❒ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ၏ Top 5%တွင်ပါဝင်သော University of South Florida (USF)တွင် ကျောင်းလျှောက်ထားဖို့စိတ်ဝင်စားပါသလား? USFမှာဆိုရင် ...
High School Diplomaရပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Ranking အမြင့်ဆုံးကျောင်းတွေကို ဆက်လက်ရွေးချယ်နိုင်မယ့် UTP High School
အခြေခံအုတ်မြစ်ကောင်းမှ ခိုင်မာတဲ့ အဆောက်အဦးတစ်ခုအဖြစ် ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် မိမိတို့၏ ရင်သွေးငယ်များကို အဆင့်မြင့်ပညာအမွေပေးလိုသူများအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ New Hampshireပြည်နယ်မှ UTP High Schoolsကိုညွှန်းဆို ပေးပါရစေ။UTP High Schools မှာ သင်ကြားပေးနေတဲ့ Programme ...
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ၁၀၀ % အထိ Scholarship ရရှိနိုင်မည့် အမေရိကန် ဘွဲ့များ အကြောင်း။
Webster University ကို ၁၉၁၅ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ စိန့်လူးဝစ်၊ မစ်ဆူရီပြည်နယ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အာရှနိုင်ငံအသီးသီးမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ Hua-Hin တွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေးနှင့်ဆက်စပ်သော ဒီဂရီဘွဲ.နှင့် ...
ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Leedsမှာ ဘာသာရပ်စုံလင်စွာရွေးချယ်သင်ကြားလိုပါသလား?
ယူကေထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များဖြင့်သာစုဖွဲ့ထားသည့် Russell Groupအဖွဲ့ဝင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် University of Leedsကို ၁၉၀၄ခုနှစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယူကေတက္ကသိုလ်များအကြား စာသင်ကြားမှုအပိုင်းနှင့် researchအပိုင်းများတွင် ထူးခြားကောင်းမွန်သည့်အတွက် Teaching Framework Excellent Gold Awardကို ရရှိထားပါတယ်။ The ...
အမေရိကန်ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်များအတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပေးမည့် Shorelight Education Group
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Shorelight Education USA ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဟာဆိုရင်ဖြင့် အမေရိကန် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် အခက်အခဲမရှိအောင်သင်ကြားနိုင်မည့် ပညာရေးလမ်းကြောင်းများကို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Shorelight Education Group ၏ Partner University များဖြစ်ကြတဲ့ • Adelphi ...
Russell Groupအဖွဲ့ဝင် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ University of Sheffieldမှာသင်ကြားလိုပါသလား?
Posted on: Feb 25 ,2019
Sheffield Medical School, Firth College , Sheffield Technical Schoolစတဲ့ကောလိပ်၃ခုနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ University of Sheffield ကို ၁၉၀၅ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ တက္ကသိုလ်အဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်နေသည့် Russell ...
GPA/ACT/SAT/IETLS/TOFEL ရမှတ်များအလိုက် ပညာသင်ဆုများလျှောက်ထားနိုင်မည့် SUNY Oswego
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ SUNY Oswego တက္ကသိုလ်ကို ၁၈၆၁ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် Broadway, Wall Streetနဲ့ Liberty ရုပ်တုကြီးတည်ရှိရာ New Yorkမြို့မှ လေယာဉ်နဲ့ ၁နာရီခန့်အကွာ သွားရောက်နိုင်တဲ့ Oswego မြို့မှာတည်ရှိပါတယ်။ The ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် 30% မှ 100%ဖြင့် ပညာသင်ကြားလိုသူများ အတွက် Tokyo International University (TIU)
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် Tokyo International University (TIU) သည် Kawagoe Cityတွင် Campus (2)ခု၊ Sakado Campus နှင့် Tokyo International University of ...
Western Sydney University၏ မြန်မာငွေကျပ် သိန်း၅၄၀ နှင့်ညီမျှသည့် ပညာသင်ဆုတွေကို Global Education Exhibition 2019 ပွဲအတွင်းလာရောက်လျှောက်ထားလိုက်ပါ
သြစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာ ပညာသင်ကြားလိုသူတွေအတွက် ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ရပ်တည်မှု Top 2%နဲ့ သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်များအကြား ရပ်တည်မှုအဆင့်၁၉နေရာမှာ ရှိတဲ့အပြင် သုတေသနပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ Western Sydney Universityကို ညွှန်းဆိုပေးလိုပါတယ်။၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bankstown, Blacktown, Campbelltown, ...
Yangon Office -
+(95)9977 977 200
Mandalay Office -
American Grade – 12 Program